Vietnam mikasa ny hamerina ny sidina anatiny rehetra amin'ity herinandro ity
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Vietnam mikasa ny hamerina ny sidina anatiny rehetra amin'ity herinandro ity
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Nanambara ny Sampan-draharahan'ny fiaramanidina sivily any Vietnam (CAAV) androany fa mangataka alalana amin'ny governemanta hanangana indray ny zotram-piaramanidina an-toerana rehetra amin'ity herinandro ity.
Ny manam-pahefana dia nanolo-kevitra ny hampifandray ny sidina avy ao an-drenivohitr'i Hanoi sy ny toeram-pandraharahana Ho Chi Minh City mankany amin'ny toeran-kafa any an-toerana manomboka ny 23 aprily, ary hampiakarana ny fahamaroan'ny sidina eo amin'ireo zotran-dalana telo lehibe.
Ny fanambarana CAAV dia tonga taorian'ny fahataperan'ny didim-panjakana nandritra ny herinandro fanampiny 'fanalavirana ara-tsosialy' tany amin'ny faritany sasany.
Ny governemanta Vietnamianina dia nampiato ny sidina anatiny nanomboka ny 1 aprily mba hanakanana ny fiparitahan'ny Covid-19 fihanaky ny aretina. Tamin'ny 16 aprily, taorian'ny nanesorana ampahany ny didim-pitsarana, dia nisy sidina an-toerana niverina tamin'ny làlam-barotra lehibe avy any Hanoi ka hatrany amin'ny tanànan'i Ho Chi Minh sy ny tanàna afovoan'i Danang.
Vietnam hatreto dia nandrakitra trangana 268 tamin'ny virus virus COVID-19, ary tsy nisy ny fahafatesan'ny coronavirus.